Ecamm Live: Rindrambaiko tsy maintsy ananana isaky ny streamer mivantana | Martech Zone
Talata, Aogositra 24, 2021 Talata, Aogositra 24, 2021 Douglas Karr
Nozaraiko ny fomba nanangonako ny biraon'ny tokantrano ho an'ny streaming mivantana sy podcasting. Ity lahatsoratra ity dia nisy fampahalalana amin'ny antsipiriany momba ny fitaovana natsangako… avy amin'ny birao mijoro, mic, arm mic, fitaovana audio, sns.
Fotoana fohy taorian'izay dia niresaka tamin'ny namako akaiky Jack Klemeyer aho, a Mpanazatra John Maxwell voamarina ary nilaza tamiko i Jack fa mila manampy aho Ecamm Live amin'ny rindrambaiko misy ny lozisialy mba hakako ny onjam-peo mivantana. Tena mamirapiratra ilay rindrambaiko, ahafahanao mamorona fakantsary virtoaly amin'ny rafitrao ahafahanao manana fanatsarana maro ho an'ny streaming mivantana.
Ao anatin'ny biraoko dia afaka mifanakalo fampidirana audio aho, mifanakalo ny fakan-tsary, manitsy ny fampidirana horonan-tsary, manampy ny birao na ny windows, mampiditra takelaka an-tsoratra, mirakitra an-toerana, na mamoaka mivantana amin'ny Facebook, LinkedIn, Twitch, YouTube, Restream.io , sy ny hafa. Sehatra matanjaka tsy mampino izay tsy vitanao ny miaina tsotra izao raha tsy tianao horonantsary sy horonan-tsary lehibe.
Ity misy horonantsary mijery topy tsara avy amin'ny Ecamm Live ry zareo…
Ecamm Live Features dia misy
Fampidirana fakantsary - Mikoriana sy manova ny fomba fijery amin'ny kalitao HD mampiasa fakantsary USB mifandray, fakan-tsarimihetsika finday, DSLR, na fakan-tsary tsy misy taratra.
Video Inputs - Fizarana fitaovana fisamborana Blackmagic HDMI, iPhone, ary fizarana efijery Mac.
Fandraisana audio - Mampiasà microphone mifandray mba hanome audio.
Fanohanana 4K - Raketo ary alefaso amin'ny 1440p sy 4K mazava.
Green Screen - Ovao ny fiavianao miaraka amin'ny fisehon'ny efijery maitso misy kalitao ao amin'ny studio.
takela - ampio lahatsoratra, countdowns, fanehoan-kevitry ny mpijery, ampahatelony ambany, ary sary toa ny logo an'ny orinasa amin'ny renirano mivantana anao.
Fanaraha-maso amin'ny fotoana tena izy - Araho maso ny fampielezam-peoo amin'ny fampisehoana mifandray.
Sehatra voatahiry - azonao atao ny manoratra seho mialoha, feno ny lohateny eo amin'ny efijery sy ny efijery mizara. Tonga soa ho ahy ity, izay ahafahako manana seho ho an'ny orinasako tsirairay.
Fizaràna efijery - Ataovy mivantana ny fampisehoanao, ny fampianaranao ary ny demoo amin'ny tsindry iray. Safidio ny hizara ny efijery manontolo anao, na fampiharana na fikandrana manokana fotsiny. Manampia velona sary-in-sary mankany amin'ny fampielezam-peo raha mikasika anao manokana.
Fampidirana Skype - manaova tafatafa amin'ny efijery fizarana mora amin'ny alàlan'ny antso an-tsarimihetsika Skype, ary ho hitanao ny vahininao asehon'ny fakantsary ao amin'ny Ecamm Live.
Restream - ny fidirana amin'ny Restream.io sy Switchboard Live dia midika hoe mivantana mivantana amin'ny sehatra maro miaraka dia tsotra toy ny tsindry iray monja. Ary miaraka amin'ny fanohanana an-tsakany sy an-davany ny fanangonana chat an'i Restream, ny Ecamm Live dia afaka mampiseho fanehoan-kevitra avy amin'ny sehatra 20 mahery aza.
Alefaso video - Mandefasa horonan-tsary ho fampidirana sy fizarana efa voarakitra an-tsoratra.
Ity misy fijerin'ny birao misy ahy miaraka amin'ireo fahaiza-manao rehetra:
Iray amin'ireo singa manandanja indrindra ho ahy ny fananana Ecamm Live fanaraha-maso mahatalanjona hahafahako manitsy ny Logitech BRIO fakan-tsary sy zooma amin'ny fakan-tsary, famirapiratana, mari-pana, tint, saturation ary fanivanana gamma.
Manomboha MAIMAIMPOANA amin'ny Ecamm Live
Fampahalalana: mpiara-miasa amin'i Ecamm Live ary Amazon ary ampidiriko ao anatin'ity lahatsoratra ity ireo rohy ireo!
Tags: lakile fanamoriana manokanafacebook mivantanaFacebook mivantana mivantanaFandefasana Facebookstreaming mivantanastreaming streaminglive streaminglogitech briohampidina-ampahatelonymamerina mandryrestream.iomivantanarindrambaiko streamingswitchboard mivantanatwitchtwitch mivantana streamingtwitch streaminglahatsary mivantanarindrambaiko fandefasana horonantsaryYouTube mivantana streamingYouTube streaming
Clouds Intelligence Optimizely: Ahoana ny fampiasana motera Stats ho fitsapana fitsapana A / B, ary haingana kokoa